#LAND - Agụmakwụkwọ 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 3 - Geofumadas
#LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 3
Ntughari di elu, elu, uzo. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ linear na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere na Nyocha na Ọrụ Obodo
Nke a bụ nke ato nke ihe Usoro 4 akpọrọ "Autocad Civil3D maka nyocha na ọrụ obodo" nke ga-enyere gị aka ịmụ ka esi ejikwa ngwanrọ Autodesk dị egwu ma tinye ya n'ọrụ na saịtị dị iche iche. Bụrụ onye ọkachamara na ngwanrọ ahụ ma nwee ike igbanye ala, gbakọọ ihe na ọnụahịa ihe owuwu ma mepụta atụmatụ dị ukwuu maka okporo ụzọ, àkwà mmiri, ọwa mmiri, n'etiti ndị ọzọ.
Iwu nke etiti (3 / 4)
- Ntughari ihe ngbanwe nke di n’elu, ntinye, imeziwanye, mbupụ.
- ykpụrụ elu ụdị, usoro ngosi, nyocha map.
- Model kpuchie.
- ubchikota, kọọtara olu n’etiti ihe dị iche iche.
IJUTA HORIZONTAL II
- Njikwa ụdị dị elu
- Idezi na iwu ihe eji achọ ihe na tebụl.
- Ihe eserese, geometric na mbipụta tabular (nke dị elu).
- Anyụike na ihe buru ibu.
- Nkọwapụta na eserese cant.
AKW ALKWỌ UKWU II
- Ewu na tebụl imewe.
- machie profaịlụ.
- Ntughari nke ihe di n’ime osisi rue n’ile profaịlụ.
- Njikwa elu, ụdị.
YB SER II NKE II
- Nkọwapụta mgbakọ dị iche iche. Ọga n’ihu.
- Ihe okike na nhazi nke okirikiri, koodu na njikọ.
- Nkọwapụta nke ntụgharị na vetikal
LINEAR ỌR II II
- Linear ọrụ na ọtụtụ alignments.
- Linear na mpaghara na usoro dị iche iche.
- Advanced edezi korido, ngalaba, ugboro, mpaghara, na-ebupụta.
- Njikwa ụdị dị elu, tebụl, ihe ndị a ga-egosipụta.
- Edezi ahịrị ahịrị.
- Nhazi di elu nke ihe na onu ahia.
- Ihe eserese na akụkọ.
Ihe nkuzi nke obodo 3D Ọzụzụ Ndị Ọrụ Ọchịchị
Previous Post«Previous #LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 4
Next Post #LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 2Next »